'बहादुर' नेपाली रक्सी पिएर मर्न डराउँदैनन्- विविधा - कान्तिपुर समाचार
श्रीमती सोध्छिन्, ‘नेपालमा पेप्सी पनि नपिउने मेरो श्रीमान् युएईमा कसरी जड्याहा भयो ?’ यसको उत्तर कसैसँग छैन ।
माघ ७, २०७५ मेघराज सापकोटा
यूएई — यूएईमा कार्यरत प्राय सबै नेपालीलाई थाहा छ, यो देशमा सार्वजनिक रूपमा मदिरा सेवन गर्न पाइँदैन । दुबई, अबुधाबीलगायतका कतिपय राज्यहरूमा त मदिरा किन्न र पिउन पनि लासेन्स लिनु पर्छ । तर पनि नेपालीले नेपालदेखि लागेको बानी छोडेका छैनन् ।
यूएईको रसअल खेमाह । तस्बिर : हेलो म्यागजिन ।
‘सर, गाडीमा बस्नुस्, हजुरलाई छोडिदिन्छु’, उनले भने ।
रक्सीले मातिएर खुट्टा टेक्ने स्थितिमै थिएनन् । बोली लरबरिएको थियो । राम्रै कम्पनी थियो । काम र कमाई पनि लोभ लाग्दै थियो ।
रक्सी पिएर गाडी कुदाउनु उनको लागि सामान्य हो ।
‘डराउनु भो ? केही हुँदैन आउनुस्, मैले कस्तो कस्तो हुँदा त गाडी कुदाएको छु । आज त कहाँ मातेको छु र?’ गाडीमा बस्न मलाई जोड गरिरहे ।
रातको झन्डै एक बजेको थियो । धेरैबेरसम्म कर गरिरहे । मैले उनीसँग यात्रा गर्न मानिन् । कहिल्यै रक्सी नपिउने रेसम लामाको गाडीमा बसेर कोठा आएँ ।
त्यतिखेर म जवअल जसै पहाड पुगेको थिएँ । यूएईको उत्तरी राज्य रसअल खेमाहमा यो पहाड पर्छ । जुन युएईको सबै भन्दा अग्लो पहाड हो । समुन्द्री सतहबाट १ हजार ९ सय ३४ मिटर अग्लो उचाइमा छ । यसलाई रसअल खेमाह सरकारले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरेको छ । यूएईका विभिन्न राज्यबाट घुम्न, हेर्न र पिकनिक खान यो पहाडमा आउने गर्दछन् ।
नेपालमा हरियाली पहाड देखेर रमाउने हामी नेपालीलाई यूएईको यो नाङगो पहाड पनि रमाइलै लाग्छ । मरुभूमिमा यस्तो पहाडमा देख्दा रमाइलो नै लाग्दो रहेछ । यसमा ग्रेगर चट्टानबाहेक कुनै रुख बुट्टा देखिन्न । फराकिलो बाटो बनाइएको यो पहाडमा संसारको सबै भन्दा लामो (२.८ किलोमिटर) जिप लाइन पनि छ । एउटा फलामको डोरीमा घोप्टो परेर द्रुत गतिमा पहाडको एउटा टुप्पोबाट अर्को टुप्पोमा यात्रा गर्दाको मज्जा बेग्लै छ । गर्मीको बेला यूएईको अन्य स्थानमा ४५ डिग्री तापक्रम हुँदा यो पहाडमा ३०/३५ डिग्रीको हाराहारीमा हुन्छ । जाडो मौसममा त कहिलेकहीँ हिउँ पनि पर्छ । यस अर्थमा यो पहाड घुम्न र पिकनिक गर्न रमाइलै छ ।
नेपालमा शनिवार भने जस्तै यूएईमा शुक्रवारको दिन छुट्टीको दिन हो । शुक्रवारको दिन पारेर यो पहाड घुम्न जानु भो भने यूएईका सातै वटा राज्यमा काम गर्ने कयौँ नेपालीहरू भेटिन्छन् । उनीहरू प्राय पिकनिक खान उक्त पहाडमा पुग्ने गर्छन् । आफ्नै साधन हुने कतिपय नेपालीहरू त बिहीवार बेलुका नै पहाडमा गएर रात बिताउने गर्दछन् । र, जुमारात मनाउँछन् । 'वीकेण्ड’ लाई अरबी भाषामा जुमेरात भनिन्छ ।
अक्सर नेपालीहरूको पिकनिक पार्टीमा रक्सी अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । यूएईमा हुने नेपालीको हरेक पिकनिक पार्टीमा रक्सी नहोस् त पिकनिक नै नहुने चलन छ । चाहे त्यो अबुधाबीको कर्निस पार्कमा होस् या बरदुबईको क्यारिफोर छेउको नेपाली पार्क (मेट्रो स्टेसन) होस् नेपालीहरूले रक्सी धोकेकै हुन्छन् ।
यूएई सरकारले पार्कलगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा खुलारुपमा रक्सी सेवन गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । अझ शारजाह राज्यमा त किनबेच र खान समेत पाइँदैन । नेपालमा कानुन पालना नगर्ने छाडा संस्कारको बानी परेका हामी नेपालीलाई यहाँको बलियो कानुनले पनि छेक्न सकेको छैन ।
बरदुबईको पार्कमा बसेर बियर पिउने केटाकेटीहरूले कागजले बेरेर लुकाएर पिउने गरेको भेटिए । अलग अलग स्थानमा काम गर्ने र बस्ने उनीहरू शुक्रवारे छुट्टीको दिन सोही स्थानमा अङ्गालो मारेर मात्तिन्छन् । कतिपय त रूखको बुट्यान मुनि 'खुलम खुला प्यार करेङ्गे हम, यस दुनियाँ से नही डरेङ्गे हम्’ शैलीमा अङ्गालो मारेर पिउँदै गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूको क्रियाकलाप देखि नसक्नु हुन्छ । तपाईँले केही बोल्नु भयो कि पिटाइ खाई हाल्नु हुन्छ । कसैले ’डिस्टर्ब’ गरे झम्टिहाल्ने ।
अलिक पढेलेखेका अफिसमा काम गर्ने नेपालीहरू त झनै बाठा । पिकनिक गर्नुपर्ने, रक्सी बिनाको पिकनिक के पिकनिक ? जुक्ति निकाली हाल्ने । पेप्सी, कोकाकोला र जुसको बोतलमा ह्विस्की लिएर जाने । त्यसैमा मात्रा मिलाएर मिसाइदिने । फ्यामिली पार्कमा बसेर आरामले बारबीक्यु गर्दै पिइदिने ।
दुबईको एउटा रेस्टुरेन्टमा कार्यरत एक जना नेपाली केही दिनदेखि साथीभाइ र घरपरिवारसँग सम्पर्क विहीन भए । साथीहरूले कम्पनीमा सोधिखोजी गरे । यस बारेमा कम्पनीले मुख खोल्न चाहेन । धेरै दिनदेखि सम्पर्क विहीन भएपछि नेपालमा रहेकी श्रीमतीले पनि जसरी हुन्छ खोजी गरिदिन अनुरोध गरिन् । छिन छिनमा ‘लौ न पत्ता लगाइदिनुस्, लौ न’ भन्दै म्यासेन्जरमा बिलौना गर्न थाले पछि खोजी सुरु गरियो । कुरा बुझ्दै जाँदा उनी दिनभर रक्सी खाएर बसेको र बेलुकीपख कम्पनीको डेलिभरी मोटर बाइक दुर्घटनामा परेछन् । स्थानीय अदालतले २५ हजार दिर्हाम सजाय तोक्यो । जरिवाना तिर्न नसके पछि उनी अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । यो घट्नालाई नजिकबाट जान्ने महेश थापा भन्छन्, ’चन्दा उठाएर सहयोग गरौँ न त भनेको, रक्सी खाएर जेल जानेलाई सहयोग गर्न कसैले मानेनन् ।’ महेशका अनुसार उनी २५ हजार दिर्हाम बराबरको जेल सजाय काटेपछि कहिले फर्केर आउन नपाउने गरी ‘डिपोर्ट’ हुँदैछन् ।
केही कमाइ होस्, घरमा बुढा भएका बाआमाको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकियोस्, बुढीलाई एक सरो कपडा फेर्न र मुना जस्ता कलिला छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सपना बोकेका यी रक्स्याहाले अन्ततः सबैको सपनालाई स्वाहा पारे । आफै पनि डिपोर्ट हुँदैछन् ।
यि प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यहाँ समाजका जान्ने बुझ्ने नेपालीहरू नै रक्सी पिएर गाडी चलाउने गर्छन् । नेपालमा जस्तो यहाँ प्रहरीले बाटोमा रोकेर मापासे चेक गर्ने भए गाडीको लाइसेन्स हुने प्रायजसो नेपालीहरू समातिन्छन् । तर यहाँ ‘केही नभएसम्म केही पनि हुन्न, भएपछि रोई कराइले पनि छुन्न ।’ ‘ड्रिन्क्स एन्ड ड्राइभ’ मा शून्य सहनशिलता अपनाएको देश हो, यूएई । नेपालमा जस्तो भनसुन र माफ चल्दैन । जरिवाना र जेल सजाय हुन्छ ।
नेपाली दूतावास अबुधाबीले जनाए अनुसार यूएईको जेलहरूमा दुई सय नेपाली खब्बुस (अरबी रोटी) चपाउँदै बसिरहेका छन् । नेपाली दूतावासले डिसेम्बर महिनामा यूएईका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका ८ वटा जेल भ्रमण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा नेपालीहरू जेलमा भेटिएको बताएको छ ।
जेलमा रहेका नेपाली मध्ये ११६ जना रक्सी खाने, झगडा गर्ने, रक्सी खाएर गाडी कुदाउनेहरू हुन् । जेल जीवन बिताइरहेकाहरू मध्ये आधा भन्दा धेरै (५८ प्रतिशत) रक्सी पिएर गैर कानुनी काम गर्नेहरू रहेछन् । त्यस्तै २० जना नेपाली चोरीको आरोपमा, १२ जना हत्याको आरोपमा र १० जना सोधपुछको क्रममा थुनामा रहेका छन् । सूचनामा जनाइए अनुसार ७ जना नेपाली नक्कली कागजात बनाएको, ८ जना यौनजन्य अपराधमा र ५ जना लागु औषधको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । २२ जना नेपाली भिसा नभएका र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी पुर्‍याएको आरोपमा थुनिएका छन् ।
त्यस्तै सन २०१८ मा यूएईमा १०७ नेपालीले ज्यान गुमाए । नेपाली दूतावास अबुधाबीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युएईमा रहेर सन् २०१८ मा ज्यान गुमाउनेमा ९८ पुरुष र ९ महिला रहेको बताइएको छ ।
उनीहरूमध्ये १०३ जनाको शव नेपाल पठाइसकिएको छ । दूतावासका अनुसार ४७ को जनाको प्राकृतिक मृत्यु, ३३ आत्महत्या र २३ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले ४ जनाको शव नेपाल पठाउन बाँकी नै छ । केही महिना पहिले यूएईमा भएको सृजना बरालको हत्याको कारण पनि रक्सी नै थियो । उनको शव अहिले पनि अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले यूएईमै रहेको छ । नेपालमा १० वर्षको नाबालक छोरो आमाको यादमा रुन्छ । यता आमाको शव कहिले नेपाल जाने हो टुङ्गो छैन ।
छुट्टीमा नेपाल गएको बेला एक जना साथीको श्रीमतीले मसँग गुनासो गरिन् । नेपालमा हुँदा पेप्सी पनि नपिउने उनका श्रीमान् केही वर्ष यूएई बसेर आउँदा जाड्याहा भएर आए भन्ने उनको गुनासो थियो । उनले पटक पटक कारण सोधिरहिन् । मसँग जवाफ थिएन ।
झन्डै २ लाख २५ हजार नेपाली कार्यरत यूएईमा दुई सय नेपाली जेलमा रहनु र १ सय ७ जना नेपालीहरूको मृत्युले एउटा दुखद सङ्केत दिएको छ । जेलमा रहनेहरू मध्ये अधिकांश रक्सीसँग सम्बन्धित छन् भने मृत्यु भएकाहरू मध्ये पनि झन्डै आधाको मात्र मृत्यु प्राकृतिक भएको बताइएको छ ।
सामान्यतः कुनै कारण बिना नै सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा, ह्दयघात भएमा वा कुनै बिमार लागेर मृत्यु भएमा प्राकृतिक मृत्यु मानिन्छ । यो मृत्युको कुनै कारण नहुन पनि सक्छ । अथवा भनौँ ठ्याक्कै यही कारणले भन्ने थाहा नभएमा पनि प्राकृतिक मृत्यु भनेर घोषणा गरिन्छ । यूएईमा मृत्यु भएका मध्ये ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । उनीहरूले आत्महत्या गर्नुमा वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको पारिवारिक विखण्डन पनि कारणको रूपमा छ । केही घट्नाहरु हेर्दा आत्महत्या गर्नेहरू मध्ये पनि अधिकांश रक्सीका नियमित पारखी थिए । त्यसै गरी २३ जना नेपालीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । रक्सी पिएर बाटो काट्नेहरू पनि दुर्घटनामा मरेका छन् ।
यहाँ प्राकृतिक मृत्यु हुनेहरू मध्ये पनि धेरै जनाको मृत्युको कारण रक्सी नै हो । दिनभर ५० डिग्रीको तातोमा काम गरेर बेलुकी अबेर कोठा पुगेर दुई चार प्याग रक्सी पिउने अनि एसी (एयर कन्डिसन) को चिसो हावा आफूतिर फर्काएर सुतेकाहरू बिहान नउठेका धेरै घटना छन् । तैपनि नेपालीहरूले उसै गरी पिउन छोडेका छैन । रक्सी पिएर झगडा गर्न छाडेका छैनन् । मातेर गाडी चलाउन छाडेका छैनन् । इज्जत त के, बरु ज्यान जाला नेपालीले रक्सी छोड्ने वाला छैन किनकि नेपालीहरू बहादुर छन् । मर्न डराउँदैनन् ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७५ १४:०४
दोस्रोपटक पनि कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ । सोमबार बिहान १२ बजे बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए ।
पहिलो बैठक सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले तनहुँको जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्‍वासप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकार भन्दाबाहिर राख्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । उनले सरकारले यो निर्णय नसच्याएसम्म संसदको कुनै कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताएका थिए ।
दोस्रोपटक सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नु अघि नै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए । सभामुख महराले पटकपटक प्रतिपक्षी सांसदलाई बस्न आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिपक्षी सांसदलाई पहिलाको एजेन्डा भन्दा अन्य विषयमा केही छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसद केही नबोली उभिरहे ।
सभामुख महराले यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयमा कुरा राखिसकेको हुनाले प्रतिपक्षीले गरेको जस्तो आशंका नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।'
फेरि सभामुख महराले आजको सबै कार्यसूची हटाएर आज उठाएकै विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरुले उठेर विरोध गरिरहे । उनले भने, ' अघि उपनेताले उठाउनु भएको यो विषय (चिकित्सा शिक्षा विधेयक) आजै हल गर्नुपर्ने विषय भएकोले यो मात्रै कार्यसूचीमा राखेर जाउँ भनेर मैले विशेष अनुरोध गरे। एउटा कार्यसूची मात्रै अगाडि बढाऔं ।'
तरपनि प्रतिपक्षी सांसद उभिरहेपछि सभामुखले माघ ८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७५ १२:५९